Ọ ga-efu $ 17.8 nde iji kpochapụ ogige egwuregwu kachasị n'ụwa
Home » Na-agbasa News Travel » Ọ ga-efu $ 17.8 nde iji kpochapụ ogige egwuregwu kachasị n'ụwa
Alaeze Ukwu Chimelong Ocean, nke ruru $ 17.8 nde iji dozie ya
Ihicha iri nke nnukwu ogige ntụrụndụ na ụwa, ọ ga-efu onye $ 36.4 nde na nde 42 ekpochapụ
Ogige ogige kachasị ọnụ iji sachaa bụ Alaeze nke Chimelong Ocean na China - chọrọ 20.7 nde na-ehichapụ antibacterial
Nke abụọ bụ Disney World Florida, chọrọ nhichapụ antibacterial nde 7.2
Na nke atọ bụ Shanghai Disney Resort na nke anọ Disneyland Paris
Site na mmụba na-arịwanye elu site na 65% n'ime ọnwa atọ gara aga, ndị mmadụ nwere obi uto maka otu ụbọchị dị ka ịga ogige ntụrụndụ mgbe mgbochi kwụsịrị.
Ogige ntụrụndụ isiokwu ga-akwadebe maka imeghe ha, mana ha kwesiri ịgba mbọ hụ na ha dị ọcha site na elu ruo na ala, nke abụghị obere ọrụ.
Ya mere, olee etu ibu a si dị ukwuu, oleekwa ego ọ ga-efu? Ndị ọkachamara n’ichepụta ụlọ ọrụ wepụtara ọnụ ọgụgụ ka ha wee chọta ihe nhicha iri n’ime ogige ntụrụndụ kachasị mkpa n’ụwa!
Na mbu bu Chimelong Ocean Kingdom, emere atụmatụ $ 17.8 nde iji kpochaa. Nnukwu 20.72km2 ezumike dị na Zhuhai, China, na-akwado ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya na ihe ngosi ma bụrụ nnukwu osimiri kachasị n'ụwa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ndị nyocha gbakọrọ na ọ ga-ewe ihe dịka 20.7 nde antibacterial na-ehichapụ disinfect - n'ezie nke ahụ bụ mgbakwunye ọzọ na 5 Guinness World Record resotu.
Nke abụọ bụ Disney World na Florida, na-efu atụmatụ atụmatụ $ 6.2 nde na nde 7.2 na-ehichapụ antibacterial iji mee ka COVID bụrụ enyi. Dabere na nyocha, nke ahụ fọrọ nke nta ka 30x dị ọnụ ala karịa nhicha ụlọ Drake maka otu afọ!
The Ebe ntụrụndụ Disney na Shanghai, Paris na California nwere ọnọdụ nke atọ, nke anọ na ise. Alaeze anwansi nke Shanghai na-efu ihe ruru $ 3.3 (nde nhichapụ nde 3.8), Disneyland Paris ga-eweghachite ndị nwe ya $ 1.7 nde na 2 nhichapụ, na California's Disneyland Resort ga-ebo ebubo na $ 1.6 nde na nde 1.8 na-ehicha.
N'ikpeazụ, ihe karịrị nde mmadụ iri na otu na-abịa kwa afọ, nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ Universal Studios na Osaka, Japan. Mpaghara ogige 11-acre ka ga-efu $ 130 na 536,042.29 na-ehichapụ.
Ndị na-eketa Airbus kwadoro mkpebi niile AGM 2021
Nkwadebe ikpeazụ maka ebe 2021 Arabian Travel Market na ihe omume mmadụ na Dubai